EMCDDA Waxay Ku Iftiimisay Dhibaatada Dawooyinka ee Yurub • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn Daroogooyinka EMCDDA waxay iftiiminaysaa dhibaatada daroogada ee Yurub
DaroogooyinkaSharci dejinta & Sharci dejinta
EMCDDA waxay iftiiminaysaa dhibaatada daroogada ee Yurub
albaabka daroogada April 28 2022
maqaal by daroogada April 28 2022
Cawaaqib xumada ka dhalan karta isticmaalka maandooriyaha sharci darrada ah waxa laga yaabaa inay ka yara muuqato sidii hore, laakiin wali way jiraan, ayuu ka digay agaasimaha EMCDDA, Alexis Goosdeel.
Saddex eray ayaa soo koobaya dhibaatada daroogada ee hadda jirta ee Yurub: Meel kasta, Wax kasta, Qof kasta.
Si aad u sharaxdo, daroogooyinka si diyaar ah ayaa loo heli karaa tiro badan, ku dhawaad ​​wax kastaa waxay noqon karaan daroogo, sababtoo ah khadadka u dhexeeya walxaha sharciga ah iyo kuwa sharci darrada ah ayaa mugdi ah, qof kastana wuu saameyn karaa, si toos ah ama si dadban. Isku-dhafkan wuxuu halis gelinayaa inuu dejiyo duufaan qumman oo kordhinaysa isticmaalka maandooriyaha iyo ku-tiirsanaanta sanadaha soo socda.
Sidaa darteed, agaasimaha EMCDDA wuxuu qabaa inay khalad weyn u tahay dawladaha EU, iyagoo ku dhibtoonaya inay ilaaliyaan dhaqaalaha dadweynaha ka dib masiibada COVID-19, si loo arko barnaamijyada ka hortagga iyo daaweynta daroogada inay yihiin bartilmaameed sahlan oo kharash-dhimis ah. Dhaqaale ahaan kuwa ugu nugul bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaanba waxay ku dhici doontaa tan ugu adag. Tani waxay u horseedi doontaa xitaa masiibooyinka shakhsi ahaaneed iyo xitaa kharashyo badan oo bulshada ah, haddii la daweynayo dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka ama la tacaalida falalka dembiyada sida soo saarista daroogada iyo ka ganacsiga.
Taa baddalkeeda, wuxuu tilmaamayaa inaan u baahanahay inaan kor u qaadno dadaalladayada jira, oo aan maalgelinno barnaamijyada ka hortagga iyo isku xirka daroogada, caafimaadka maskaxda iyo siyaasadaha bulshada, halkii aan ula macaamili lahayn jawaabo kala duwan. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ku aragno daroogo iftiin cusub. Maaddaama ay aad iyo aad u badan tahay oo suuqa soo galaysa, fikraddii hore ee dadka lagu duro heroin-ka ee dariiqa ayaan mar dambe ka tarjumayn xaqiiqada ama dhibaatooyinka haysta bulshooyinkeenna.
Runtii dunidu aad bay uga duwan tahay sidii ay ahaan jirtay EMCDDA Markii ugu horreysay albaabadeeda laga furay Lisbon 1995. Diirada-saarkooda iyo shaqadoodu waxay si joogto ah ula qabsanayaan isbeddelka muuqaalka iyo qaababka isticmaalka daroogada. Bilowgii, hadafkoodu waxa uu ahaa in ay noqdaan xog bixiye: si ay u horumariyaan hababka iyo shabakadaha ururinta iyo falanqaynta xogta muhiimka ah - oo inta badan ka maqan wakhtiga - siyaasad-dejiyeyaasha. Iyadoo talo adag laga helayo xarumaha qaranka ee kantaroolka maandooriyaha, hay'adaha kale ee EU-da iyo la-hawlgalayaasha caalamiga ah, howlgalkaas si guul leh ayaa loo fuliyay oo wuu sii socdaa. Laakin hadda waxa ay u muuqataa in la qiimaynayo doorka laga bilaabo bixiyaha macluumaadka una gudbaya adeeg bixiye firfircooni leh.
Sanadihii la soo dhaafay, wadooyin cusub ayaa lagu sahamiyay habab kormeer oo cusub si loo iftiimiyo horumarinta qaababka daroogada. Kuwani waxay u dhexeeyaan makro ilaa micro: aqoonsashada walxaha cusub ee synthetic iyo psychoactive iyo isbeddelada isticmaalka xashiishadda si loo falanqeeyo biyaha wasakhda ah ee magaalooyinka Yurub ama haraaga saliingaha ee barnaamijyada isweydaarsiga irbadaha si loo ogaado caadooyinka daroogada ee ugu dambeeyay.
Habka EMCDDA ee dhibaatada daroogada Yurub ayaa sii kordheysa laba laab. Marka hore, si aad si fiican u fahamto saamaynta isbeddellada muddada-dheer ee caafimaadka iyo badbaadada bulshada. Marka labaad, in si degdeg ah loo ogaado khataraha cusub si ay go'aan-qaadayaashu u horumariyaan diyaargarowga iyo ka jawaabista.
Maxay EMCDDA qabataa?
Wakaaladu waxay caawisaa siyaasad dejiyeyaasha Yurub iyo qaranka, xirfadlayaasha iyo xirfadlayaasha goobta si ay wax uga qabtaan sababaha iyo cawaaqibka isticmaalka daroogada. Waxay tan ku sameeysaa iyadoo bixisa xog dhab ah, ujeedo leh, la isku halayn karo oo la is barbardhigi karo xogta Yurub taasoo saldhig u ah go'aannadooda. Waxaanu ku shaqaynaa qaab dhismeedka siyaasadda daroogada ee Midowga Yurub ee si taxadar leh isu dheeli tiran, oo leh istiraatijiyaddeeda iyo qorshe hawleedkeeda. Kuwani waxay ka tarjumayaan qiyamka aasaasiga ah ee Midowga Yurub ee xuquuqda bini'aadamka iyo asaasiga ah iyo aaminsanaanta is-afgaradka, doodaha iyo caddaynta sayniska oo ah dhismaha siyaasadda.
Komishanka Yurub ayaa dhawaan soo jeediyay in la siiyo wakaaladda door muhiim ah oo ku saabsan falanqaynta khataraha hadda iyo mustaqbalka ee daroogada sharci darrada ah ee EU. Tani waxay daba socotay qiimayn madax bannaan oo dibadda ah oo u aqoonsaday wakaaladda inay tahay xarun heer sare ah oo cilmiyeed, labadaba Europa iyo mid caalami ah, waxayna ku taliyeen in la kordhiyo EMCDDA.
Go'aankaas waxaa iska leh baarlamaanka Yurub iyo golaha Midowga Yurub. Wax kasta oo ay go'aansadaan, yoolka kama dambaysta ah ee EMCDDA wuxuu ahaanayaa sidii hore: in la kordhiyo dadaallada lagu ilaalinayo dadweynaha oo gacan looga geysto Yurub caafimaad iyo badbaado leh.
Ilaha ao IAmExpat (EN), The ParliamentMagazine (EN)
siyaasadda daroogadaEuropacilmi baaris
Shirkadda Cannabis ayaa xarun caafimaad oo marijuana ka furatay Thailand
€10 milyan oo Yuuro si loogu caawiyo shirkadaha inay ka fogaadaan inay wiiqaan...
Bukaanno yar ayaa si sharci ah uga iibsada xashiishadda cannabis farmashiyaha
Sida cabitaanka iyo daroogada loo eegi jiray,...
La soco hada: Wakhtiga Biyaha 2
Dukumiintiyo guuleysata oo Dosed ayaa ku socota Amsterdam